Nin dilaa ah oo xabsiga ku jira ayaa baaritaan lagu sameeyay, kaddib markii uu qirtay inuu Mareykanka dhexdiisa ku dilay 90 qof, muddo 40 sanadood gudahood ah. | Biyoguurenews.com
Home Wararka Nin dilaa ah oo xabsiga ku jira ayaa baaritaan lagu sameeyay, kaddib...
Nin dilaa ah oo xabsiga ku jira ayaa baaritaan lagu sameeyay, kaddib markii uu qirtay inuu Mareykanka dhexdiisa ku dilay 90 qof, muddo 40 sanadood gudahood ah.
Waaxda dambi-baarista Mareykanka ee FBI-da ayaa aaminsan in Samuel Little, oo 78 jir ah uu ka mid yahay dadka dilalka ugu badan geystay ee lagu xusi karo taariikhda dalkaas.
Laamaha kala duwan ee dowladda ayaa hadda ka shaqeynaya sidii ay isugu aaddin lahaayeen qirashadiisa iyo dilal fara badan oo dalkaas loogu geystay tobannaan haween ah, intii u dhaxeysay sannadihii 1970-kii ilaa 2005-tii.
Dambi-baareyaasha ayaa sheegaya iney ilaa hadda xaqiijiyeen in ninkan uu ka dambeeyay 34 dil islamarkaana ay ku howlan yihiin sidii ay u soo saari lahaayeen kuwo kale.
Little ayaa hadda qaadanaya xukun xabsi daa’in ah oo lagu riday sannadkii 2014-kii, ka dib markii lagu helay inuu dilay 3 haween ah.
Wuxuu gacanta ciidammada ammaanka ku jiray tan iyo bishii Siteembar ee sannadkii 2012-kii, markaas oo loo xiray eedeymo la xiriira ka ganacsiga maandooriyaha.
Tijaabooyin hidda sidaha DNA-ga ah oo laga qaaday Little ayaa caddeymo u noqday dilal cid fulisay la garan weysanaa oo saddex haween ah loo geystay sannadihii 1987-kii iyo 1989-kii.
Dhammaan saddexdaas haweenka ah ayaa la jir dilay ka hor inta aan meydadkooda lagu tuurin meelo qashin qub ah.
Wuxuu ku cataabay inuusan dambi galin, balse waxaa ugu dambeyntii lagu riday saddex xukun oo xabsi daa’in ah oo is daba socda, isagoo aan wax fursad ahna u heli doonin in cafis loo fidiyo.
Xilligaas ka hor wuxuu ahaa qof dambiyo badan loo diiwaan galiyay, waxaana waxyeellada uu geystay ka mid ahaa falal kufsi ah iyo burcadnimo hubeysan.
Saraakiisha FBI-da ayaa sheegay in Little uu qirtay dilka 90 ruux, oo uu ka fuliyay inta u dhaxeysa gobollada California iyo Maryland.
Dambi baareyaasha ayaa rumeysan in dumarka uu ninkan bartilmaameedsaday ay u badnaayeen kuwa jirkooda ka ganacsada iyo kuwa maandooriyeyaasha isticmaala.
War bixin ka soo baxday FBI-da ayaa lagu yiri:
“Habka uu Little wax u dili jiray wuxuu ahaa mid uusan wax caddeymo ah ku reebi jirin. Maadaama uu mar u tartami jiray inuu feeryahan noqdo, wuxuu dadka uu dilay ugu horreyn dhulka ku dhigi jiray feer culus ka dibna wuu ceejin jiray”.
“Maadaama uusan wax toori ama rasaas ah u adeegsanin dilalka, waxaa adkeyd in la caddeeyo sida ay u dhaceen, sababoo ah waxaa jira dhimashooyin badan oo ka dhaca isdilitaanka, isticmaalka xad-dhaafka ah ee maandooriyaha, shilalka iyo dhimashooyinka dabiiciga ah”.
Dilalka ugu badan ee uu ninkan geystay ayaa lagu qiyaasay iney ku wakhtiyeysnaayeen 1970-meeyadii ilaa horraantii 1980-meeyadii, xilligaasoo aysan wali soo bixin tignoolojiyadda hidde sidaha DNA-ga ee ay booliska adeegsadaan.
Previous articleItoobiya Oo Shaacisay Shuruudaha Lagu Soo Xulayo 59 Dublamaasi Oo Dhawaan La Magacaabayo
Next articleDawladda Ingiriiska Oo War Ka Soo Saartey Arimo Ay Somaliland Kula Fikir Tahay Iyo Mawqifka UK Ee Aqoonsiga S/land